संयुक्त राष्ट्र सङ्घ संयुक्त राज्य अमेरिकाको कठपुतली होइन। अमेरिकाले ल्याएको कुनै पनि प्रस्ताव आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने र पारित गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ कसरी विश्वका स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको अभिभावक बन्न सक्छ? बलियो र धनी मुलुकको काम स–साना मुलुकमा प्रभाव जमाउने, दबाब दिने, आक्रमण गर्ने, राष्ट्र प्रमुखहरूको हत्या गर्ने होइन। बलियोको नाउँमा संसारका दर्जनौं मुलुकमा सेना तैनाथ गरिने संरा अमेरिकालाई सरास सेना फिर्ता लिन किन दबाब दिंदैन? अमेरिकाको दादागिरी नरोकेसम्म संसारमा शान्ति छाउने छैन, सन्तोषको सास फेरेर जीवन निर्वाह गर्न पाउने छैन।
संसारमा सबै मुलुकहरू स्वतन्त्र छन्। हरेक मुलुकको आ–आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार्नुपर्छ। तर अमेरिका अरू देशमा हैकम जमाउन चाहन्छ र सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ। सार्वभौम मुलुकको सम्मान गर्नुपर्छ। अरू देशमाथि थिचोमिचो गर्ने, आक्रमण गर्ने मुलुकको विश्वले विरोध गर्नुपर्छ, संयुक्त सङ्घले विरोध गर्नुपर्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस माडुरोलाई पछिल्लो तानाशाहको संज्ञा दिए। भेनेजुयलामा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन कुनै हालतमा विश्व समुदायलाई नस्वीकार्ने बताए। भेनेजुयला सरकारको क्रियाकलापप्रति आफ्नो देशको पूर्ण रूपमा असहमति भएको उनले बताए। अरू देशको क्रियाकलापमा असहमति जनाउने अरू मुलुकमा भएको संविधान अस्वीकार गर्ने हैसियत ट्रम्पमा कसरी आयो?
ट्रम्प शान्तिवादी, प्रजातन्त्रवादी भइदिएका भए राष्ट्रसङ्घीय महासभामा उनले उत्तर कोरियालाई ध्वस्त बनाउनुको विकल्प छैन भन्ने छैनन्। अरू मुलुकलाई ध्वस्त बनाउने चेतावनी दिने ट्रम्प के संहारकारी होइन? बरू आतङ्कवादीहरूले देश ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिंदैनन्। कुनै देशलाई ध्वस्त पार्ने अमेरिकी शासकको विचार फिर्ता लिनुपर्छ। ध्वस्त पार्ने विचारको विपक्षमा संरा सङ्घ उभिनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले शान्ति, स्वतन्त्रता, न्याय र मानवीय सेवाको लागि काम गर्नुपर्छ।
संरा अमेरिका नरसंहारकारी मुलुक हो। उसमा हतियारको उन्माद छ। अमेरिका शक्तिसम्पन्न राष्ट्र बन्नुको अर्थ के स–साना मुलुकमा हैकम जमाउनु हो? हैकम जमाउने अमेरिकालाई संरा सङ्घले नियन्त्रण गर्नुपर्दैन? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मनपरी बोले पनि संरा सङ्घ किन मौन? भोलि उत्तर कोरिया या अन्य मुलुकले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ध्वस्त बनाउँछ भन्यो भने के त्यो निको मान्छ? अमेरिकासँग सैन्य तथा अस्त्रशस्त्रको मात रहेसम्म विश्वले शान्ति पाउनेछैन। अमेरिका विश्वको लागि खतराको मुलुक बनिरहेको छ। यसतर्फ विश्वका मुलुकहरूको ध्यान जानुपर्छ।